भेटियो वर्षौं पहिलेको सुनका सिक्का -
[ April 16, 2021 ] पार्कमा रुखमुनी बसेका चार मजदुर माथि खस्यो चट्याङ, सिसी टिभीमा रेकर्ड भयो भिडियो हे’र्नुहोस समाचार
[ April 16, 2021 ] नेपालमै यस्तो चलन ! ७० बर्षका बा भन्छन् ‘यीनलाई मैले तानेर ल्याएको हो’ (भिडियो सहित) समाचार
Homeसमाचारभेटियो वर्षौं पहिलेको सुनका सिक्का
September 28, 2020 admin समाचार 7863
आफ्नो देशको गौर’वशाली इति’हासका बारेमा जान्दा सबै रोमा’ञ्चित हुने गर्दछन् । अझ इतिहा’समा सुनको सिक्काले भरीएको गाडधन भे’टिएको भए प्र’संग निकै रोचक हुन्छ । यस्तै भएको छ, इजरायलमा ।
इज’रायल पुरावशेष प्राधि’करण (इजरायल एन्टिक्विटिज अर्थरिटिज)ले सार्वज’निक गरेको सुचना अनुसार यस देशका केहि स्वयम्सेवक युवाले हजारौ बर्ष पुरानो ख’जानाको खोज गरेका छन् । उक्त ख’जानामा सयौं बर्ष पुरा’नो सुनको सिक्का रहेको छ ।
भे’टिएको सुनको सि’क्काको मात्रा निकै धेरै रहेको खबर बाहिरिए पनि कति मा’त्रामा सिक्का थिए भन्नेबारे भने सुचना सार्व’जनिक गरिएको छैन । भेटि’एको सुनको बोरामा ४२५ भन्दा बढि सिक्का रहेको बता’इएको छ ।
स’यौं बर्ष पहिले कसैले एक मै’दानमा निकै गहिरो खा’ल्डो खनेर गाडेको अवस्था’मा रहेको सुनको सिक्का’लाई इजरायलका युवा स्वयम्से’वकले उत्खनन गरेका हुन् । खजाना फेला परेसंगै सि’क्काको अध्य’यन थालि’एको छ । -खबर हब बाट साभार
October 4, 2020 admin समाचार 5258
February 23, 2021 admin समाचार 1325
January 8, 2021 admin समाचार 2720
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (164119)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (158680)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (158184)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (157572)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (157230)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (155160)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (155065)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (153408)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (148818)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145153)